Ubuye ngezinkani kweyethelevishini uLucia Mthiyane
UFISA abesifazane bangazivaleli amathuba ngokuma ngomsebenzi owodwa uLucia Mthiyane obuye ngemidlalo eyehlukene kwithelevishini. Isithombe: SIGCINIWE
Bongiwe Zuma | May 31, 2021
WADUMALA evaleleka ngaphandle emidlalweni emikhulu yethelevishini kungenasizathu umlingisi owayehamba phambili emidlalweni eminingi esadlala namanje. ULucia Mthiyane obuye ngezinkani ekulingiseni, utshele leli phephandaba ukuthi akakaze angakuthandi ukuba umlingisi noma athathe isinqumo sokuyeka kodwa wavele wabona abanikazi bemidlalo eminingi sebemvalela ngaphandle. Muva nje uLucia ubonakala emidlalweni ehlukene okubalwa iDiep City edlala indawo kaSoja esazoqhubeka nokubonakala kulo mdlalo. Ngaphandle kwawo uyabonakala nakokhonjiswa phakathi nezinsuku kuSABC1 Uzalo edlala indawo kadadewabo kaMaCele enguNkk Gwala owunina kaSambulo.
"Ukulingisa yiwona msebenzi engidume ngawo kakhulu phambilini kodwa ngithe sengiqala sengikhombisa ikhono lomculo kwavele kwacweba ngemidlalo yethelevishini. Angazi noma ngendlela esakhiwe ngayo eNingizimu Afrika abantu abakakujwayeli ukwamukela ukuthi umuntu uyakwazi ukuba namakhono amaningi asebenze ngawo. Ngiyalingisa, ngiyacula, ngiyapheka, ngiwumbhali, ngiyadayisa ngiyakwazi ukukwenza konke ngiyafisa kwamukeleke ngaziwe ngako ngingavalelwa,"kusho uLucia.
Eqhuba uLucia uthe ngesikhathi kukhalwa ngamathuba omsebenzi yena ube nenhlanhla izinto zakhe zavuleleka ngoba leso sikhathi simfice epaquza ezama engahlezi phansi. "Ngiyacela kubantu besifazane abasha abathanda ukuba abalingisi bangakufaki kakhulu emqondweni ukuthi babonakala kwithelevishini baze bazifakele ingcindezi. Isikhathi samanje nempilo sifuna abantu abazamayo, uma ukade ubonakele kwithelevishini akukho okuvimbayo ngokuzama amanye amathuba ngakusasa. Ungakhethi nohlobo lwemsebenzi ngoba uzobambelela kwithelevishini kuphela usabe ukwenza eminye imsebenzi ezokulekelela ugcine uba nokhwantalala impilo ingaqhubeki,"kusho uLucia.
UFISA abesifazane bangazivaleli amathuba ngokuma ngomsebenzi owodwa uLucia Mthiyane obuye ngemidlalo eyhlukene kwithelevishini Isithombe: SIGCINIWE
Ephetha uthe ukukhula empilweni nokuzama amanye amathuba kubalulekile kuyena nokwenza aziphonse yonke indawo. Yize indawo kaRachel Phakathi yambeka ebalazweni emidlalweni yethelevishini eminyakeni eyedlule kodwa namanje abantu basamkhumbula ngayo kodwa wakhetha ukuyishiya wayofunda okunye ngokulingisa ngethemba lokuthola izindawo ezihlukile kwabezilingisa.
Ngaphandle kwale midlalo engenhla uLucia kulindeleke ukuthi aqhamuke nakwiDurban Gen kungekudala edlala indawo ka-Albertina. Uma engekho matasa nokulingisa uyaqhubeka nokuphekela abantu izibiliboco ezehlukene. Elinye ibhizinisi asezimisele ngokungena kulo agxile ukudayisa nokuyinto athi angakhuthaza ngayo abanye abantu besifazane ukuze bangasweli ebe ekhona amathuba okuzithuthuikisa. Ukutshala ngenye yezinto azifela ngayo kulezi zinsuku nokwenza abe nezingadi zokudla okuhlukene ekhaya. Incwadi yakhe yokupheka iKitchen Queen uthi yenza kahle futhi iyayifeza inhloso yakhe kubantu abaningi abayithengayo befunda nangezinhlobo zokudla okuhlukene. Maningi namafilimu neziqephu asazobonakala kuzo okubalwa uBettina Wethu aseqalile ukuvela kuwo kuSABC 1.